Yaa ka dambeeya rabshadaha ka dhacaya xaafadda Islii ee magaalada Nairobi?!!
Magaalada Nairobi ee wadanka Kenya, gaar ahaan xaafadda Islii ee ay Soomaalida ku badan tahay ayaa noqotay xaafad ay ku soo noqnoqdeen rabshadaha, qaraxyada, dilalka iyo falalka nabadgelyo xumida, iyadoo ciidamada Dowladda Kenya ay ka sameynayaan mar kasta oo rabshad ka dhacdo xaafadaasi howlgallo baaritaan oo natiijadooda aanay weli helin.
Haddaba su'aasha ay isweydiinayaan dad badan ayaa noqotay "Yaa ka dambeeya rabshadaha ka dhacaya xaafadda Islii ee magaalada Nairobi?", hase yeeshee waxaanu u kuur galnay xaaladad dhabta ah ee ka jirta xaafadda Islii ee ay degaan Soomaalida, gaar ahaan dhinacyada amniga iyo ganacsiga.
Magaalada Nairobi ee wadanka Kenya waxaa ka soo ifbaxay dhallinyaro lagu magacaabo "Super Power" kuwaasi oo xiriir la leh ururka Al-Shabaab, hase yeeshee kooxahaan dhallinyarada ah iyagu si dhab ah ugama tirsana ururka Al-Shabaab balse waxaa ka dhaxeeya xiriir wada shaqeyneed.
Dhallinyarada lagu magacaabo Super Power oo ah kooxaha ka dambeeya rabshadaha ka dhacaya degaanada ay Soomaalidu ku badan yihiin ayaa noqday wadada ururka Al-Shabaab u soo maro falalka ay ka geysanayaan wadanka Kenya.
Ciidamada Booliska wadanka Kenya uma babac dhigi karaan dhallinyarada Super Power oo ah nolol iyo geeri ay isku mid u tahay, waxayna howlgaladooda yihiin kuwo dhibaatooyin miiran ah oo ujeedadoodu tahay inay helaan dhaqaale meeshii ay ka helaanba.
Kooxahaan dhallinyarada ah ee dhibaatooyinka ka wada xaafadda Islii oo ah dhallinyaro Soomaali ah, waxay saldhigyo iyo fariisimo ku leeyihiin degaanada ay Soomaalidu degto, hase yeeshee dadka xog-ogaalka u ah dhacdooyinka ka dhacaya xaafadda Islii ayaa ka welwelsan xaaladda kooxaha dhallinyarada Super Power la baxay oo iminka qarka u saaran inay af xayaas ku dhacaan mar haddii kooxo argagixiso caalamku doondoonayo uu dhaqaale ka soo galo.
Sarkaal u hadlay hay'adda la dagaalanka kooxaha argagixisada ah oo ka tirsan Dowladda Kenya ayaa mar uu ka hadlayay xaaladda xaafadda Islii waxa uu sheegay in dhallinyarada Soomaalida ah ee iyagu la baxay "Super Power" ay ka war hayaan, isagoo sheegay in kooxahaasi ay la shaqeeyaan qaar ka mid ah ganacsatada Soomaalida iyo urur kale oo ka jira wadanka Kenya, kuwaasi oo xiriir la leh madax ka tirsan Dowladda Kenya.
Ugu dambeyntii ammaanka degaanada ay Soomaalidu ka degan tahay wadanka waxaa iminka soo weajahay xaaladii ugu darneyd oo la xariira dhinacyada ammaanka iyo joogitaanka wadanka Kenya, iyadoo hay'adaha ammaanka wadankaasi iyo shacabka Keenyaatiga ah ay iminka qarka u saaran yihiin inay Soomaalida ku sameeyaan midab kala sooc iyo takoor dhinaca jinsiga ah, taasi oo suuragal ay tahay inay dhici karto haddii aanay labada dowladood iska kaashan sidii looga hortegi lahaa kooxaha dhibaatooyinka ka wada labada wadan.